Ime atụmatụ maka atụmatụ maka Social Media
Monday, March 8, 2010 Sunday, October 4, 2015 Matt Chandler kwuru
Aga m echeta onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị m, Maazị Dilk. Ewezuga nyocha ọ na-eme onwe ya mgbe ọ pụtara na ọ chọrọ ịkọcha (? Ọ dị mma… BUGS!?) Ojiji eji eme ihe ugboro ugboro jisiri ike mee ka amamihe dị na ụbụrụ m gbakwunye. N'etiti ndị ọkacha mmasị ya:
Ọ bụrụ n’ịdị n’atụmatụ, ị n’atụmatụ ịda.
Ugbu a, nke a bụ tupu mbido ihe ngosi ahụ na-akpali akpali na foto nke ọdụ azụ whale na ndị mmadụ na-arị ugwu na-ahụ na ụlọ ọrụ ọ bụla. Oge nke ndụmọdụ ndị amamihe bụ ókèala nke ndị mụrụ gị, ndị nkuzi, na PBS. N'agbanyeghị ụdị ndụmọdụ dị otu a, nke a rapaara m n'ahụ.
Ugbu a na ndụ ọkachamara m, ịhazi atụmatụ na-ewe oge dị oke mkpa, yana maka ezi ihe kpatara ya. Mgbe ị na-achịkọta ọdịnaya na usoro mgbasa ozi ọha na eze, otu ọrụ kachasị mkpa bụ ịtọlite ​​nyiwe na ọrụ ndị kachasị baa uru maka mkpa gị ma hazie usoro ị ga-esi mee ya.
Ọbụghị naanị na ịme ụzọ ọgbụgba-nzuzu na-eme ka ụdị agwa gị belata, ọ bụkwa ego na-efufu. Enweghị ezigbo ajụjụ nke ihe e mere ebe – na oge nọrọ na-eme ya – gị online mgbalị ndị a zuru ezu igbu oge na ego.
Shoplọ ahịa dijitalụ ọ bụla bara uru nnu ha ga-eme ka ha nwee usoro ha. Ọ bụrụ na ha emeghị, jụọ ha banyere ya. Ọ bụrụ na ọ dị ha mma ma ọ bụ na ha enweghị kpamkpam, gbaa ọsọ. You ga-ahụ na mmezi azụmaahịa gị n'ịntanetị na -ebelata ma enweghị ihe ọ bụla ị ga - egosi maka ya belụ na ịkagbuola ego.
Iji mezuo nke ahụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nọ n'ọnọdụ ịga naanị ya na oghere dijitalụ, ana m akwado gị ka ị lelee CMO's Guide to the Social Landscape. Ọ bụ ihu ọma a na-elekọta mmadụ media cheat mpempe akwụkwọ na uru na adịghị ike nke n'elu nyiwe na ọrụ. Nyocha a mere site na Ntọala 97th, na ọ bụ ezigbo ụzọ mpempe akwụkwọ nduzi.
Enwere ọtụtụ ọrụ ntanetị mmekọrịta na ebe ahụ; Ọ dịghị otu onye bụ ihe ziri ezi, dịka ịnwa iji ha niile eme ihe adịghị mma. Enweghị azịza ọ bụla, ọ dịghị otu usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-arụ ọrụ maka ndị ahịa ọ bụla. Site n'iji ezi uche na-eme atụmatụ na-ewuli elu, ị na-eji oge na ego gị eme ihe n'ụzọ kasị mma.
Tags: Keduelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa oziatumatu mgbasa ozi
Ihe Mere I Ji Kwuru I wepu aha Ya Taa
Social Media Marketing bụ banyere Social, Ọ bụghị Media
Naanị ịmalite na mgbasa ozi mmekọrịta na ịmụ ọtụtụ ihe kwa ụbọchị. Ma na-akọwapụta uche m ka m na-aga n'ihu. Nnukwu saịtị ebe a! Na-atụ anya ịgụkwu.
N'ihe banyere ahịrịokwu ahụ “Ọ bụrụ na ị ghara ime atụmatụ, ị na-eme atụmatụ ịda” I´d say is kpam kpam eziokwu. Mgbasa ozi ọ bụla maka mgbasa ozi ọha na eze ga-enwerịrị ihe ọ pụtara, nzube ya na ebumnobi ikpeazụ ya. Ojiji nke netwọkụ mmekọrịta emeela ka puku kwuru puku ohere nke obere azụmaahịa mepụta mmata mara mma, melite ọrụ ndị ahịa, bulie ahịa ma wulite mmekọrịta. Kedu ihe bụ isi ozugbo ị mepụtara atụmatụ gị? Iji nọrọ ebe ahụ, wuo obodo gị ma lekọta ya!
Ana m akwado azịza na-esonụ http://bit.ly/aqAGbe na Startups.com, ebe Maria Sipka kwuru maka atụmatụ zuru ezu iji wuo obodo gị na ntanetị.
BTW, ị nwere ike idowe azụmahịa nke gị Q & A´s 😉
Mar 10, 2010 na 10: 10 AM
Nke ahụ bụ nnukwu ndepụta, Pete. Daalụ maka ịgụ na onyinye.
Ọtụtụ ndị folks anaghịdị ekwu okwu otu (chee echiche maka ihe ịchọrọ ime) na usoro ndị ọzọ niile enweghị isi. Enweghi ebumnuche doro anya na ebumnuche iji tinye usoro, ị na-agbapụ mbụ ma na-ajụ ajụjụ ma emechaa.